Indlela Iimali usapho
Kwixesha lethu, imali, Ingxaki kukuba iingcaphephe udidi, phantse intimate, kwaye kuyanqaphazekaarely lixoxiwe isa, nkqu phakathi amalungu osapho. Akukho okukodwa uza inyibilika i-Ezimbalwa, nkqu ukuba, eneneni, phakathi kwendoda nomfazi, zonke-mali imibuzo kufuneka kuhlangatyezwana, kuthathelwa ingqalelo zonke nuances. Jikelele, kwiintsapho apho omabini amaqabane umsebenzi, naliphi na ityala, omnye wabo earns ngaphezu komnye, kwaye sibonwa iselwa eqhelekileyo. Kwaye akukho namnye ikholelwa ukuba lowo unika i-mthwalo zokunikeza uninzi mthwalo ka-Usapho.
Yintoni wenza ezininzi kongquzulwano kwaye ezingachanekanga ukuba suspect ukuba omnye amaqabane ubangela ukuba lonke usapho, ezinye kusenokuba i-unnecessary inkcitho, apho exclusively basondelelane ukuba lwesiqu Iimfuno, ukuhlangabezana neemfuno ka-usapho. Kwi imathiriyali icala usapho ubomi a ngena kwi-intshabalalo budlelwane nabanye waba kuyimfuneko ukuba lokuqala chaza ngokucacileyo indlela Iimali usapho. Imali kwaye usapho lwabiwo-mali yi kuyimfuneko yinxalenye yethu ubomi ukuba sisebenzisa faced kwi yonke imihla qho ngonyaka, kwaye le ayiyo eqhelekileyo ebomini kunokwenzeka. Efumaneka kwi-usapho ke, ezemali, ingakumbi impressive quantities, Illusion ka-permissiveness kwaye olugqityiweyo phezu wonke umba ubomi yayo kwimeko-bume unako ukwenza. Kubalulekile kuyanqaphazekaarely sizathu uninzi nempixano, irritability, kwaye njengoko ngenxa rhoqo divorces. Ngokunxulumene psychologists, imali ayikho, lwesithathu ngu superfluous kwi-budlelwane, amahlakani kufuneka kanjalo ukufunda ukufumana ihamba kunye. Oku kubaluleke ngakumbi inyaniso kuba abantu ukuba kusetyenziswa phambi umtshato kwaye elizimeleyo ubomi baba, kwaye ngabo, ukuba alahle kwezabo imali, okanye ngokulondolozayo, ngaphambili zange kwenzeke a nzima omnye. Mali disputes kungabangela zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo izizathu. Oku ibe ngenxa yokuba a limited inani mali Umntu phantsi Usamuel, kwaye phoselani bonke thabatha emotions ukuba ngokuhamba kwexesha kuba accumulated kwimeko – ill-mbasa bechitha, ingakumbi xa akuyomfuneko sichaza. Kwimeko apho usapho ingeniso akavumelekanga ukuba ibe ncinane okanye ukwanda, akusoloko ilungelelaniswe iimfuno, awathi, ngokulandelelanayo, ukuchongeka iindleko, kwaye isiphumo yi scandal ubizwa ngokuba kwakhona. Baninzi iimeko apho ngenxa elijikelezayo-ngaphandle basuke imali, Ezimbalwa kuba enze isigqibo wokuqhawula umtshato, kwaye enkulu inxalenye wokuqhawula umtshato iingxoxo, ukwahlulwa ngokufanayo ipropati, kwenzekile yokuba ezimbalwa iinyanga ngokufanayo misela, okanye ukumisela ka-Cutlery. Ke ngoko, ukumiselwa kwebandla usapho lwabiwo-mali iya ukulawula ngaba ithuba ukuphepha reckless bechitha, kwaye ke ngoko nako ukusebenzisa Imali ngaphandle remorse. Ukuba awuqinisekanga, njengokuba kubhaliwe ikhangeleka kuba, earn okulungileyo imali, kodwa imali akusoloko ngokwaneleyo, ngoko ke ukuba Imeko akusebenzi correspond ukuba inyaniso, okanye ngaba ngokulula andinaku ulawulo lwakho bechitha. Ingakumbi kuyimfuneko ukuba khangela, ukuba icace phandle ukuba uza ukuchitha nkqu ngaphezu kwenu earn, usebenzisa i-credit amakhadi, kwaye sinking kwi ityala. Le Meko ayikwazi, njengoko ixesha elide njengoko omabini amaqabane bayaphila kwaye bamele ukuqhubeka ukuba uvuma. Kodwa Jikelele, kubalulekile rare kwaye ubomi babo ngendlela enkulu endleleni, kwaye yesibini uzama yonke into ukugcina oko unako. Njengoko ngenxa iinzame zethu, ngalo ndlela, ukuphumela kwiqanda, kwaye eyona imbi kunjalo, uthabatha. Jikelele, Nokungabikho Ongcwele imali uvimba, kwaye ezinye iziqinisekiso kuba elizayo, economically Iqabane lakho constantly phantsi Usamuel, apho ngokucacileyo kwindlela yakhe yokuziphatha, usapho ubudlelwane phakathi, kwaye Jikelele zimvo lomgaqo-usapho. Kule meko, eyona ndlela ingcono izakuba wasteful Imfundo omnye mlingane a habit ukukhangela yakho iindleko.
Le njongo, oluthile isivumelwano phakathi partners adapts kulo
Ukuba akunjalo, uvuma, kwaye ukuqhubeka bechitha, kungcono ukunika ixesha, ithuba, kwaye usapho ke, ezemali kwi ngaphezulu kwezoqoqosho partners. Oku kubaluleke ngakumbi inyaniso kuba young couples, ngaphambi koko imali zilawulwe kwi ezizezenu, kuba limited isixa-mali, okanye belong ukuba ezahlukeneyo loluntu amaqela. Ukuba usapho kwakunjalo ekuqaleni kwaphuhliswa, ukuba naluphi na utshintsho kwi-mali mimiselo, kuyimfuneko ukuba le Meko fundamentally. Ekugqibeleni, eyona Ndlela ayiyo, ukuba usapho lwakho kwaye lam kwaye yonke imali ziziswe endlwini imali kuba izahlulo rhoqo.
Eyenza usapho lwabiwo-mali kuyimfuneko ukuba bathethe baze baxoxe
Ukuba ufuna a harmonious umtshato, trust, yayikukwenza kule isihloko ezifunekayo. Kunye, bayafuna iziqu zabo uluhlu iindleko ngokuqhelekileyo ngendlela ethile ixesha ixesha kwenzeka.
Ngoko ke, ngaba khetha kuyimfuneko inkcitho, apho awunakuba kucinywa
Umzekelo, izinto eziluncedo unako imihla, intlawulo Kindergarten, imali-mboleko intlawulo, iindleko gasoline, ukutya, ngaphambili ezaziwayo iziganeko okanye celebrations, kwaye ngaphezulu. Olandelayo, ebizwa-iindleko ezongezelelweyo, wena ukuwahlawulela ukuchaza, kodwa abakho osisigxina, ezifana ukuthenga ka-impahla, indlu nezixhobo zasekhaya, ifenitshala. Emva kokuba unikezelo ezisisiseko kwaye iindleko ezongezelelweyo, uyakwazi ukuhlala kuba abanye free imali. Imali wena yiya, kunye akukho ukuzisola malunga babo abancinane whims, ukuchitha usapho iholide, okanye enkulu purchases. Ukuze alawule, kuba iindleko ezongezelelweyo, ingaba incwadi, Similarity ukuya ekhaya, apho kufuneka ingxelo yonke imali wahamba. Ngoko ke ngoko uyakwazi lula Podometer isixa-mali inkunkuma, thelekisa kubo kunye ingeniso kwaye nako ukuze kutshatyalaliswe unwanted yokuthenga. Kunye elula iincam ngemiba efana usapho yezimali, waphendula, uza ngokukhawuleza nokufunda ukuze siphile ngaphakathi zethu kuthetha, kwaye hayi ndinovelwano na utyeshelo lomgaqo, okanye, kwiimeko ezibalaseleyo scarcity ethile. Eyona nto kukuba kufuneka i-banqwenela ukuba thatha inyathelo ukuya Kwintlanganiso ukutshintsha zabo imikhuba, ngenxa yokuba esi sigqibo sinokuba kuba ngomhla we-ikamva ubudlelwane phakathi kwi-usapho, ixesha zabo reliability kunye nempumelelo kwabo ukuba beka phantsi njalo. Musa ukubeka imali kwi yonke into, ngenxa ebomini kukho ezininzi exabisekileyo izinto, apho akakwazi ukuhlawula nayiphi na isixa-mali Yebhanki-izikhumbuzo
← Lencoko kwi-Uvavanyo ka disemba
Njani ukubhala a kubekho inkqubela kwindlela engcono, ukuhlangabezana kum. (Intlanganiso) →